नेपाल आज | शरीरमा यस्ता समस्या देखिएको छ, सावधान ! ब्रेन ट्युमर हुन सक्छ
शरीरमा यस्ता समस्या देखिएको छ, सावधान ! ब्रेन ट्युमर हुन सक्छ
मस्तिष्कका कोषहरूमा असामान्य वृद्धि हुनुलाई ब्रेन ट्युमर भनिन्छ । ब्रेन ट्युमर विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र यो मष्तिस्को जुनसुकै कुनै भागमा पनि हुन सक्छ । यीमध्ये केही ब्रेन ट्युमरले क्यान्सर हुन्छन् त केही हुँदैनन् ।
केहि मानिसहरु ब्रेन ट्युमरले दिमागलाई मात्र प्रभावित गर्छ भन्ने मान्यता राख्छन। तर यो वास्तविक भने होइन । वास्तवमा दिमागले नै पूरै शरीरको कार्यप्रणाली सञ्चालन गर्छ । तसर्थ, दिमागमा गडबडी हुँदा शरीरले पनि स्वस्थ तरिकाले काम गर्न सक्दैन । ब्रेन ट्युमरका कारण शरीरमा हानिकारण असर भएन भने पनि शरीर त्यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सक्दैन ।
ब्रेन ट्युमर हुदा शरीरमा यसप्रकारको लक्षण देखिन्छ, हेर्नुहोस
शरीरका विभिन्न भागमा आघात
विशेषज्ञका अनुसार दिमागमा ट्युमर र शरीरमा त्यसको प्रभावबीच आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ । जब व्यक्तिमा ब्रेन ट्युमर हुन्छ, उसलाई अक्सर शरीरका विभिन्न भागमा आघात पुग्न थाल्छ । बास्तवमा ट्युमरका कारण मस्तिष्कमा जलन हुन्छ, जसले मस्तिष्कका नसा तथा तन्त्रिकालाई अनियन्त्रित बनाउँछ र व्यक्तिभित्र असामान्य हलचल पैदा हुन्छ । ट्युमरजस्तै आघातका पनि विभिन्न रूप देखिन्छन् । जस्तै, पूरै शरीर वा शरीरको कुनै भागमा झड्का , बेहोसी, यी सबै आघातकै रूप हुन् ।
शरीर लठ्ठिनु वा निष्क्रिय हुनु
आँखा हेर्न समस्या
ब्रेन ट्युमरले रोगीको सोच्ने–सम्झिने क्षमतामा धेरै हदसम्म प्रभावित बनाउँछ । मस्तिष्कको केही भागमा ट्युमर हुँदा रोगीलाई बोल्नमा मात्र समस्या नभएर शब्दहरूलाई सम्झिन र बुझ्नमा समेत कठिनाइ हुने गर्छ।यदि मस्तिष्कको अगाडिको हिस्सामा ट्युमर भएमा त्यसले व्यक्तिको सोच र व्यक्तित्वलाई विपरीत तरिकाले प्रभावित बनाउँछ ।
असामान्य रुपमा टाउको दुख्नु
ट्युमर मस्तिष्कको जुनसुकै हिस्सामा भए पनि यसले खोपडीभित्र दबाब उत्पन्न गर्छ । यसका कारण व्यक्तिमा कडा टाउको दुखाइदेखि लिएर जिउ चिलाउने, उल्टी हुनेजस्ता समस्या हुन्छन् । यति मात्र होइन, यसका कारण व्यक्तिमा सधैँजसो आलस्य पैदा हुने वा सुत्नमा समस्या हुनेजस्ता कठिनाइ आइपर्छन् । यसका अतिरिक्त यो दबाबका कारण व्यक्ति ‘कोमा’मा पनि जान सक्छ ।